Wargeys Caalamiya oo baahiyey in Soomaaliya siidaysay Nin u dhashay Somaliland oo loo qabtey Weerarkii Al-shabaab Ee Xeebta Liido |
Wargeys Caalamiya oo baahiyey in Soomaaliya siidaysay Nin u dhashay Somaliland oo loo qabtey Weerarkii Al-shabaab Ee Xeebta Liido
Roma (GNN)-Wargeys ka soo baxa Talyaaniga ayaa lagu sheegay in xukuumadda Soomaaliya xabsiga ka sii deysay nin lagu eedeynayey inuu ka dambeeyey qaraxii dhowaan lagu qaaday goob ku taalay xeebta Liido, ee Muqdisho, taasoo hadii ay dhabowdo halis ku noqonaysa dhamaan Waddamada jaaka la ah ee Somaliland ka mid tahay.
Sida Shalay lagu baahiyey wargeys la yidhaahdo Articolo21, oo ka soo baxa magaalada Roma, ee Caasimadda Talyaaniga ayaa lagu sheegay inay ogaadeen in nin lagu magacaabo Ismaaciil Muuse Axmed Guuleed oo ciidamada sirdoonka Soomaalidu dhowaan u xidheen weerarkii lagu qaaday maqaaxi ku taalay xeebta Liido, ee Muqdisho la sii daayey.
Ismaaciil Muuse Axmed oo wargeysku sheegay inuu isir ahaan ka soo jeedo Somaliland, balse haysto dhalashada dalka Holland ayaa xogahiisa raaciyey inuu si joogto ah u booqdo guriga wasiirka Amaanka Soomaaliya Cabdirasaaq Maxamed Cumar, oo dhinaca kale uu adeer u yahay Madaxweynaha Soomaaliya Xassan Sheekh, oo walaalkii dhalay.
Inkastoo wargeyska Articolo21 aanu tafaasiil ka bixin qaabka ay ku ogaadeen siidaynta ninkaa, ama ay ka ogaadeen sirdoonka Talyaaniga, ayaa dhinaca kale wargeyska Himilo ayaanay u suurtoobin inuu jawaab ka helo agaasimaha wargeyska Articolo21 Mr. Stefano Corradino, oo weydiinay qaabka ay ku ogaadeen xogtan, mar aanu la xidhiidhnay.
Dhinaca kale, siidaynta eedeysanahan isir ahaan ka soo jeeda Somaliland ee loo haystay inuu ka dambeeyey qaraxyo kala duwan oo ka dhacay Soomaaliya ayaa haddii ay dhabowdo noqonaysa arrin halis amaan innagu yeelata, isla markaana saamayn ku yeelan doonta dhamaan Waddamada la jaarka ah Soomaaliya ee Somaliland ku jirto, una baahan in hay’adaha amaanku si dhow ula socdaan.